हाम्रो शरीरलाई कसरी पानी पिउदा पुग्छ फाइदा ? यस्तो छ पानी पिउने तरिका
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। पानी जीवनको लागि अत्यावश्यक ची हो । आयुवर्दे र योगमा पानीलाई भोजनभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । **यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु **
हामी धेरै जसोको बानी हुन्छ कम पानी पिउने । त्यसै गरि केहिको बानी हुन्छ, दिनभरमा निकै पानी पिउने । तर के हामीले पिएको पानीले हाम्रो स्वास्थ्यमा फाइदा पुर्याएको छ त ? कसरी पानी पिउदा स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्छ ? एकैचोटी धेरै पानी पिउने गर्नुहुँदैन । यसले शरीरमा पाचन प्रक्रियामा खराबी आउन सक्छ ।
दिनभरीमा कम्तिमा ३ लिटर पानी पिउनुहोस् । बिहान बासी मुखमा मन तातो पानी सक्दो धेरै पिउनुहोस् । बिहान शौचालय जानुअघि पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । धेरै चिसो पानी शरीरमा पच्न गाह्रो हुन्छ त्यसैले मनतातो पानी राम्रो मानिन्छ ।
पानी एकै पल्ट धेरै घटघटी कहिलै नपिउनुहोस् । बरु चिया पिए जस्तो गरेर सिप लिदै पिउँनुहोस् । प्यास लाग्यो भन्दैमा हतारिदै पानी पिउनु हुँदैन । उभिएर कहिलै पनि पानी पिउनुहुदैन । यसले घुँडामा समस्या हुन्छ ।
चिसो र असाध्यै तातो पानी कहिलै नपिउँनुहोस् । सँधै मनतातो पानी पिउँनुहोस् । घामबाट र शौचालयबाट फर्के लगत्तै पानी पिउनु पनि स्वास्थ्यकालागि खराब मानिन्छ ।
खाली पेटमा प्यास लागेमा केही चिज खाएपछि मात्रै पानी पिउनु उपयुक्त मानिन्छ । सुत्नु भन्दा अगाडी १ गिलास मनतातो पानी पिउनुहोस् । राति निन्द्राबाट उठेर एक्कासी पानी पिउदा ज्वरो आउने सम्भावना हुन्छ ।
पानी पिएलगत्तै दौडिने वा खेल्ने गर्नुहुँदैन । पानी पिउदा निकै तनावमा पिउनु राम्रो मानिदैन, शान्त भएर पानी पिउनु नै राम्रो हुन्छ । पानी पिउदा कहिले पनि सुतेर पिउनु हुँदैन । र अध्याँरो समयमा पानी पिउनु हुँदैन । पानी पिएपछि पहिलो सास नाकबाट नभई मुखबाट छोड्नु उपयुक्त हुन्छ ।